सहयोगको शक्ति - Himalkhabar.com
टिप्पणीआइतबार, बैशाख २०, २०७२
पीडितलाई गरिने सहयोगबाहेक यतिबेला कुनै पनि विरोध र आलोचनाको अर्थ छैन ।
यस्तो लाग्थ्यो, सरकारलाई कम्पनले छाडिसकेको छैन । तर, महाभूकम्पको एकघण्टा नबित्दै सुरक्षाकर्मी भने उद्धारमा उत्रिसकेका थिए ।
जान्नेबुझनेहरूले नै बेलाबेला प्रश्न गर्थे, नेपाल जस्तो मुलुकमा एकलाख जति सेना किन ? यति धेरै प्रहरी किन ? यस पटकको महाभूकम्पले स्पष्ट जवाफ दिएको छ ।
हाम्रो जस्तो मुलुकमा सेना लडाइँमा भन्दा बढी प्राकृतिक विपत्तिका लागि रहेछन् । अहिले देखिएको छ, भूकम्प पीडितको ज्यान जोगाउन कतिपय सुरक्षाकर्मी आफैं मृत्युवरण गर्न पुगेका छन् । वास्तविक शहीद उनीहरू हुन् ।
सुरक्षाकर्मी हाम्रो दैनिक जीवनबाट पर देखिन्छन् । तर, उनीहरूले हल्लाखल्ला नगरी काम गरिदिएकै कारण हामी सुरक्षित महसूस गर्न सकिरहेका छौं ।
दुई वर्षअघि राति ३ बजे उठेर बुटबलबाट काठमाडौं आइरहेका बेला बाटामा प्रहरीले गाडी रोके । चालकलाई कताबाट आएको, कता जान लागेको ? भनेर सोधे । कागजपत्र हेरे । र, राम्रोसँग जानू भने । प्रहरीले राति–राति त्यसरी चेकजाँच गरिदिएकै हुनाले हामीले यात्रामा सहज अनुभूति गर्न सक्यौं ।
बालबालिकालाई अहिले पनि ‘पख्, सेना–पुलिस बोलाइदिन्छु’ भन्दै तर्साउने गरिन्छ । यसले सेना–प्रहरी त खराब रहेछन् भन्ने प्रभाव उनीहरूमा परिरहन्छ । कसैको खराब बानी, कठोर बोली छ भने कस्तो पुलिस जस्तो ! भन्ने चलन अझै हटिसकेको छैन ।
तर, सुरक्षाकर्मी खलपात्र होइनन्, हाम्रा सहयोगी हुन् भनी चित्रण गर्नुपर्छ । यसले उनीहरूमा समस्या पर्दा सुरक्षाकर्मीको सहयोग कसरी लिने भन्ने सिकाउन सकोस् ।
सामाजिक सञ्जाल र पत्रिकामा सरकारले सहायता पुर्‍याउन सकेन भन्ने आशयका खबर आइरहेका छन् ।
जोखिम कम गर्न सरकारले केही गर्न सकेन भनेर लेख्ने र बोल्ने समय पनि आउँछ तर यतिबेला आलोचनाले अर्थ राख्दैनन् । आलोचना र विरोधका मसी, शक्ति र समय पीडितको राहतमा खर्चनुपर्छ ।
पशुपतिको आर्यघाटमा आधा मात्र जलेका लाश वागमतीमा फालिएका खबर आएका छन् । यसले महामारीको खतरा निम्त्याउन सक्छ । यसतर्फ सञ्चारकर्मी र सचेत नागरिक सबैले बेलैमा ध्यान दिनुपर्छ ।
आफ्ना वरिपरिका भूकम्प पीडितलाई लुगाका साथै पानी, सुक्खा खानेकुरा जस्तै; चिउरा, भुटेको भटमास, बदाम, चना दिएर मद्दत गर्न सकिन्छ । उद्धार नपुगेका गाउँबारे सरकारलाई सूचित गरिदिनु पनि यस्तो बेला ठूलो कुरा हो ।
सरकारलाई आलोचना मात्र गर्नाले राम्रो नियतले काम गर्नेहरूको मनोबल गिर्न सक्छ । यसले असामाजिक तत्वले फाइदा उठाउन सक्छन् । कठिन घडीमा जसले जसरी सक्छन् त्यसरी नै सहयोग गर्ने हो ।